Aragtidayadu waa inagoo u fidinno hadiyadda rajada walaalaheena u baahan, waxaan sababi doonnaa saameyn noocan oo kale ah in noloshu waligeed is beddeli doonto. Iyada oo la kaashanayo bulshada, kaliya ma beddeli doonno nolosha dadka kale laakiin waxaan la kulmi doonnaa isbeddel ka dhex dhaca nafteenna. Aqbalaada masuuliyadu waa furaha. Waxaan dooneynaa inaanan awood u yeelan laakiin aan dhiirrigelino kuwa u baahan iyaga oo siinaya baahiyaha aasaasiga ah, sida cuntada iyo dharka, iyo sidoo kale timo jarista, fasallada awood-siinta, fasallada karinta iyo farsamada gacanta, taageerada fasaxa iyo ilaha guryaha, daryeelka caafimaadka iyo tixraacyada la-talinta. Waxaan rajeyneynaa in barnaamijkeenan qof walba uu ku helayo xoog uu kaga faa'iideysto kartidooda iyo kartida Eebbe siiyay maadaama aan ka shaqeyneyno dib u dhiska bulshada.
Hadiyadaha Rajada waxaa aasaasay Samona J. Burleson bishii Oktoobar 2017 ka dib markay aragtay xaqiiqda xaaladda guri la'aanta ee Seattle, WA (in ka badan 12,000 oo qof oo ay saamaysay), saamaynta ay ku leedahay carruurta, iyo rabitaanka daacadda ah ee bulshada inay ka caawiso wax yar oo la taaban karo siyaabo la taaban karo oo sidaas lagu sameeyo. GOH waxay ahayd hay'addii ugu horreysay ee abuurta liiska rabitaanka Kirismaska ee Othello Village Tiny House Camp ee Koonfurta Seattle. Samona waxay markaa la xiriirtay iskuulada, hoyga, kaamamka iyo dadka guryaha deggan ee dakhligoodu hooseeyo.
Hadafka asalka ahaa wuxuu ahaa in la caawiyo ugu yaraan 50 shaqsi Kirismaska. Markay ahayd 13-kii Diseembar, 2017, in ka badan 500 oo qof ayaa "la korsaday" xilliga Kirismaska. Caawimadu waxay socotey sanadka oo dhan boorsooyinka ardayda, timo jare bilaash ah, xafladaha dhalashada ee carruurta, tabka iskuulada oo laga bixiyo mashaariic iyo inbadan. Sanadkii 2018, waxaan caawinnay in kabadan 6000 oo qof dhammaan Seattle. Tirooyinkeennu way sii kordhayaan – deeq-bixiyeyaashayada iyo sidoo kale qoysaska la caawiyey way saddex laabmeen annagoo isku diyaarinayna sannad-guuradeenna 4aad ee Barnaamijka Caawinta Masiixiga!
Kooxdayada Hadiyadaha rajada leh ee cajiibka ah waxay ka kooban yihiin beel mutadawiciin ah oo ka kooban qowmiyado kala duwan, diimo iyo jinsiyado kala duwan. Waxa aan ka wada simanahay waa ballanqaadkeena aan sare ugu qaadayno kuwa kale. Bixinta waa la is qaadsiinayaa oo kaliya saameyn kuma yeelanayso qofka qaata, waxay sidoo kale beddeleysaa kan wax bixiya. Hadiyad runti waxay u furaysaa jidka dadka oo dhan. Kama aad ku turunturoon degelkan shil. Ka qayb qaado oo la wadaag hadiyadaada!